मेलम्ची आयोजनाको ९४ प्रतिशत काम सम्पन्न, असार भित्रै काठमाडौंमा पानी झार्ने लक्ष्य - Nepal Insider
काठमाडौं– सरकारले आगामी असार महिनासम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौं झार्ने घोषणा गरेको छ । मलेम्ची आयोजनाबारे बिहीबार स्वेतपत्र जारी गर्दै खानेपानी मन्त्री बिना मगरले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्र मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको शुरुङ परीक्षण गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेकी हुन् ।
मन्त्री मगरले जारी गरेको स्वेतपत्रमा मलेम्ची आयोजनामा हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये ७ वटा कामहरु चालू आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सिनो हाइड्रोसँगको ठेक्का सम्झौतामा १ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।
Prevकोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारमा दिनरात खटेका स्वास्थ्यकर्मीको मास्कले बिगारेको अनुहारहरु…
Nextआहा ! पर्वत र बागलुङ जोड्ने एसियाकै लामो झोलुङ्गे पुल
मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठको आज जन्मदिन, कति बर्ष पुगिन् ?
सरकारको आग्रह : खाद्यान्न देशमै उत्पादन गरौँ, मास्क उत्पादन बढाऔँ